Rehefa tsy maintsy mandeha ny mpizahatany… mankany amin'ny trano fidiovana: manafosafo ny tsara indrindra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Rehefa tsy maintsy mandeha ny mpizahatany… mankany amin'ny trano fidiovana: manafosafo ny tsara indrindra
Aprily 14, 2018
Andao hiresaka kabine. Ny loka iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany amin'ny Toilet 2018 dia te-hamoaka ny tsara indrindra. Eny, misy tokoa ny loka amin'izany.
Taorian'ny taona maro namakafakana ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany, ny loka ao amin'ny MyTravelresearch.com dia mikendry ny hampiseho ireo toerana fizahan-tany izay manana trano fidiovana ho an'ny daholobe madio, mamorona ary misy fivoarana be dia be hampisondrotra ny sarin'ny toerana itodiana ary hiteraka dolara fizahan-tany. Eritrereto izany: Mijanona ho any ny olona, ​​avy eo mandany vola rehefa any izy ireo.
Amin'ny maha mpamaky anao dia azonao atao ny manolotra ny trano fidianao tianao ampiasaina amin'ny fizahanao.
Mety ho eo amin'ny toerana manintona eo an-toerana, valan-javaboary, valan-javaboary, trano fisakafoanana, toeram-pivarotana lehibe, seranam-piaramanidina, na eny amin'ny faritry ny trano fandraisam-bahiny - na aiza na aiza alehan'ny mpizahatany (amin'ny faran'ny andro dia mpizahatany daholo isika) .
Ny kabine dia azo tendrena amin'ireto sokajy manaraka ireto:
- Toerana tsara indrindra: Izay ahitan'ny trano fidiovana ary angamba heverina ho manintona ny tenany
- Best Design: Famirapiratan'ny mari-trano amin'ny trano fidiovana, famoronana endrika ary famoronana
- Fanandramana fandroana quirkiest: Mifandraika amin'ny lova eo an-toerana, fahafinaretana, na manan-danja hafa
- Toileta mora azo: Fanohanana ny hevitra fizahantany ho an'ny rehetra
- Fandrosoana ara-pahasalamana: Kendrena amin'ny fampandrosoana toeran-toekarena izay nahavita dingana lehibe amin'ny famatsian-kabine ho an'ny daholobe
- Mpandray anjara ara-toekarena tsara indrindra: Fa rehefa mijanona amin'ny trano fidiovana any amin'ny toerana itodiana ny olona ary mijanona handany mihoatra ny denaria
- Fanoloran-tena ankapobeny amin'ny fizahan-tany amin'ny kabine
Izay rehetra afaka manendry trano fidiovana lehibe amin'ny firenena rehetra. Ny fanekena izao dia ekena avy amin'ny toerana fizahan-tany sy orinasa te-hamafa ny tany amin'ny fifaninanana.
Maimaimpoana ny manolotra anarana, ary ny eto ny endrika an-tserasera.
Manakaiky ny fisoratana anarana ny 1 Mey 2018.